H & X Electronic Co., Ltd waxaa dhisay sanadkii 2010 kaas oo ku salaysan yahay warshad Dongguan Fenggang Hongxin Bag.
Our Warshadda ayaa la dhisay muddo ka badan 10 sano la waayo aragnimada adag ee cayn kasta oo accessories electronic Consumer, gaar ahaan ku saabsan dhammaan noocyada xaaladaha iyo bacaha, sida arrinta cimlibaadhista, kiiska nylon, kiiska Neoprene, kiiska PVC hufan, kiiska PU, maqaar case iyo iwm
At H & X, waxaan la qorsheeyo oo sameeyo kiisaska caadada iyo bac u adeegta si ay u ilaaliyaan iyo waxyaabaha gaadiidka shuruudaha gaarka ah. Waxaa naga go'an liicliicashola'aan si heer sare ah iyo qancinta macaamiisha ayaa noo kasbadeen sumcad hoggaamiyaha warshadaha ah. Dhab ahaantii, kooxda taageerada macaamiisha waxaa ka go'an in ay ka jawaabto wax su'aalo ah aad labaatan iyo afar saacadood gudahood. Taasi waa nooca adeegga macaamiisha ayaa noo kasbadeen heerka haynta sare iyo dhererka xiriirka macaamiisha celceliska siddeed sannadood.
workshop Wax tolidda, ka dhigi kiiska semi-dhammeeyayna galay wax soo saarka ah ka dhergaan. Dhammaan shaqaalaha waxaa la kulmay worke, 70% oo ka mid ah shaqeeyo in our facotry badan 7years.
Neating workshop: Shaqaalaha dadaala gooyay threads extral ka kiiska si loo hubiyo in kiisaska nadiif ah oo nidaamsan marka ay furan yihiin ..
Gym Armband Bag, Consumer Electronics Accessories , Kids Bag School , Eva Hard Case , Eva Hard Shell Pencil Case loogu talagalay Carruurta 2, Football qaabeeya Guddoomiyaha Case ,